ऋतिक रोशनको ‘सुपर ३०’ मा के छ कहानी ? « Khabarhub
ऋतिक रोशनको ‘सुपर ३०’ मा के छ कहानी ?
मुम्बई – बलिउडमा बायोपिक फिल्मको बाढी आइरहेको छ । यसैबीच आनन्द कुमारको जीवनमा आधारित फिल्म ‘सुपर ३०’ आउँदो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो फिल्म भारतका प्रतिभाशाली गणितज्ञ आनन्द कुमारको जीवनमा आधारित छ ।
आनन्द कुमार भारतको बिहार राज्यमा एक निकै नै गरीब परिवारमा जन्मेका थिए । उनले गरीब प्रतिभाशाली बच्चा पैसाको अभावमा प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दैनन् । उनीहरुसँग कोचिङ कक्षा पढ्न पैसा पनि हुँदैन । साथै उनीहरुसँग अरु पनि केही हुँदैन ।
आनन्दले ‘सुपर ३०’ संस्थानमा कमजोर विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्न शुरु गर्छन् । उनले जतिसक्दो मद्दत गर्छन् । हेर्दाहेर्दै उनले पढाएका कैयन् विद्यार्थीहरुले चर्चा कमाउन थाल्छन् ।
यो फिल्म आनन्दको जीवनको सङ्घर्ष र उनले शुरु गरेको ‘सुपर ३०’ संस्थानको स्थापना र चुनौतीको कथामा आधारित छ । यो फिल्म एक प्रेरणादायक कहानीमा आधारित छ ।
प्रकाशित मिति : २६ असार २०७६, बिहीबार १२ : ५७ बजे
उदयपुरमा कार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
उदयपुर- उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिका–६ बैजनाथ खोलाको पुलमा मंगलबार बेलुकी
मतगणना परिसरमा १३ वर्षीया इच्छा दाहालकाे काँक्रो व्यापार
बारा- बाराको निजगढमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना निजगढ नगरपालिकाको वडा
४४४ स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक : कुन दलले कति जिते ?
काठमाडौँ – देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४४४ वटामा मतगणना